UManel Loureiro: ungubani futhi yiziphi izincwadi lo mbhali azibhalile | Izincwadi Zamanje
I-Encarni Arcoya | | Abalobi
Umthombo wesithombe uManel Loureiro: Libertaddigital
Igama likaManel Loureiro lizwakala lijwayelekile kuwe ngoba ulizwile. Uma ungumfundi okhuthele, kungenzeka ukuthi ufunde ezinye zazo. Uma kungenjalo, futhi uhlala njalo kuthelevishini, emsakazweni noma emshinini wezindaba, kungenzeka ukuthi wakuthola. Futhi ngukuthi lo mbhali, intatheli kanye nommeli ubekwazi ukwenza ipeni (nodebe) kube ngumsebenzi wakhe.
Kodwa, Manel Loureiro uyaba ubani? Iziphi izincwadi ozibhalile? Uma unesifiso sokuhlangana nalo mbhali, khona-ke sizokutshela konke esikwaziyo ngaye.
1 Manel Loureiro uyaba ubani
2 Yiziphi izincwadi ezibhalwe nguManel Loureiro
2.1 I-Apocalypse z
2.2 Izinsuku ezimnyama
2.3 IGame of Thrones: incwadi ebukhali njengensimbi iValyrian
2.4 Ulaka lwabalungile
2.5 Umgibeli wokugcina
2.7 Amashumi amabili
2.8 Umnyango, isasasa eliyinqaba kunazo zonke likaManel Loureiro
Manel Loureiro uyaba ubani
UManel Loureiro wazalelwa ePontevedra ngoDisemba 30, 1975. Wathweswa iziqu zezoMthetho eNyuvesi yaseSantiago de Compostela, ngakho-ke ungummeli. Kodwa-ke, ngezinsuku zakhe zokufunda wayenethuba lokubheka imisebenzi ehlobene nethelevishini. Ekuqaleni wakwenza njengomethuli wohlelo, kepha ngokuhamba kwesikhathi wabhekana nezikripthi futhi kulapho abona khona ukuthi ukuthanda kwakhe ngokweqiniso kwakungewona umthetho, noma ubuntatheli noma ithelevishini, kepha kwakungukubhala.
Vele, akususi lokho qhubeka usebenzisana nabezindaba. Futhi, yize ebengumsakazi kuGalicia Television, manje usebenzisana emaphephandabeni afana neLa voz de Galicia, iphephandaba i-ABC, i-El Mundo, umagazini we-GQ kodwa nasemsakazweni, ikakhulukazi kuCadena Ser no-Onda Cero. Ukwaze nokumbona kuthelevishini, ikakhulukazi ohlelweni iCuarto Milenio, eCuatro, lapho ibilokhu inesigaba esithile kusukela ngo-2016.
Inoveli yakhe yokuqala yavela nge-blog. Futhi ngukuthi uzinikele ekubhaleni izincwadi ngezikhathi zakhe futhi, kwaba njalo impumelelo yalokhu, ngabafundi abangaphezulu kwesigidi nohhafu abaku-inthanethi, kwabangela ukuthi, lapho eyiqeda, yashicilelwa. Futhi akuzange kudumaze futhi; Kwakungesikhathi esifushane umthengisi othengisa kakhulu, okwadala ukuthi abashicileli abaningi babone lo mbhali owayeqhamuka futhi owayeheha ukunakwa okungaphezulu, hhayi kuphela emphakathini waseSpain, kodwa nakwamanye amazwe. Kungakho-ke, ngemuva kwaleya ncwadi yokuqala, i-Apocalypse Z, kwavela ezinye izikhala eminyakeni eminingana (ngo-2011 kuphela wakhipha izincwadi ezimbili).
Njengokulangazelela, sizokutshela ukuthi kusukela kwinoveli yakhe yokuqala kukhona nomdlalo webhodi. Lokhu kwaxhaswa ngokubuyiselwa kwemali lapho kushicilelwa le ndaba.
UManel Loureiro angaziqhenya ngoba ungomunye wababhali abambalwa baseSpain okwazile ukuba sohlwini lwezincwadi ezithengisa kakhulu e-United States, okuyinto okungelula ukuyifeza.
Yiziphi izincwadi ezibhalwe nguManel Loureiro
El Incwadi yokuqala eyashicilelwa nguManel Loureiro kwakungu-Apocalypse Z, ngo-2007, yindlu yokushicilela yakwaDolmen (yize ngemuva kweminyaka emithathu yaphinde yakhululwa enye indlu yokushicilela, iPlaza & Janés). Kusukela ngaleso sikhathi, futhi ebona impumelelo abe nayo, waqala ukunikela ngesikhathi esengeziwe sokubhala, futhi eminyakeni edlule izincwadi eziningi ezibhalwe nguye bezilokhu zifika. Siyazibuyekeza.
Ayikho i-Intanethi. Ayikho ithelevishini. Noma iselula.
Akusekho lutho oluzokukhumbuza ukuthi ungumuntu wabantu.
Manje sekusele umgomo owodwa kuphela: UKUSINDA.
Iqala kanjalo-ke indaba lapho igciwane lisabalale khona ngaphandle kokuzibamba kuyo yonke iplanethi futhi libulale wonke umuntu onalo. Inkinga ukuthi, ngemuva kwamahora ambalwa, leyondoda efile ibuyela ekuphileni futhi ikwenza lokho ngendlela enolaka kakhulu.
ESpain, ummeli osemusha uphethe ukugcina idayari lapho ebhala khona konke okubonakalayo, akubonayo usuku lonke. Kuze kube yilapho bengena endlini yakhe futhi kufanele abalekele eGalicia, manje sekunegama elinye elithi: Apocalypse Z.
Abasindile be-Apocalypse Z bayakwazi ukufinyelela eCanary Islands, enye yezindawo zokugcina eziphephe kwi-Undead. Kepha abakutholayo lapho umbuso wezempi ohileleke empini yombango, enabantu ababulawa yindlala futhi engenazo nezinsiza zokuphila.
Kuyinto ingxenye yesibili yendaba yakhe yokuqala, lapho ahlenga khona umlingiswa ophambili wenoveli yakhe, okwenza uManel Loureiro aphumelele kangaka, futhi waphinda wamfaka enkingeni ezama ukusindisa impilo yakhe kwabangakafi.
IGame of Thrones: incwadi ebukhali njengensimbi iValyrian
Le ncwadi yayingabhalwanga ngokuphelele nguye, wayengumbhali nje futhi, njengoba igama layo liphakamisa, yayikhuluma ngochungechunge lweGame of Thrones kanye nemiphumela eyayinayo i-series.
Abasindile be-apocalypse ye-zombie banethuba: basindiswe maphakathi nolwandle elinye lamaqembu okugcina ahlelekile asele eMhlabeni. Baphoqwa ukuba bahambisane nabatakuli babo, bafinyelela eGulf of Mexico, indawo ebukeka ichuma ngaphansi kokubusa okuhle komshumayeli ongaqondakali.
Kuzoincwadi yokugcina yeSambulo Z, lapho umbhali ebeka khona iqembu labasindile enkingeni futhi ephinda ezama ukuphila ezweni eliya liba nodlame. Yize umuntu engafundile futhi esafuna ukuvelela, enamanga futhi ekhohlisa, ngakho-ke ophikisayo nabangane bakhe kuzofanela bazame ukunqoba izithiyo futhi.
Agasti 1939. Umkhumbi omkhulu wolwandle obizwa ngeValkirie ubonakala uqhekeke e-Atlantic Ocean. Umkhumbi omdala wezokuthutha uwuthola ngenhlanhla wawudonsela ethekwini, ngemuva kokuthola ukuthi sekusele ingane enezinyanga ezimbalwa kuphela ... nokunye okunye okungekho muntu okwaziyo ukukukhomba.
Imfihlakalo yokuthi, Eminyakeni engama-70 kamuva, iyaqhubeka nokuphazamisa abaningi, kuze kufike ezingeni lokuthi usomabhizinisi anqume ukubuyisela umkhumbi ekuphileni ukuze alandele indlela efanayo naleyo ayenza esikhathini esidlule efuna impendulo kulokho okwenzekile. Futhi-ke, labo abasesikebheni kuzofanele bahlakaniphe ngokwanele ukuvimbela into efanayo ukuthi ingenzeki futhi.
Impilo kaCassandra icishe iphelele kuze kube wusuku lapho ehlelwa yingozi engajwayelekile yomgwaqo emshiya equlekile. Ngemuva kwamasonto ambalwa, nangemuva kokululama okuyisimangaliso, uCassandra uthola ukuthi umhlaba wakhe usushintshe ngokuphelele: othile useqalile ukugudluza ikhaya lakhe nomndeni wakhe futhi ubuye abe nemiphumela engemihle angakwazi ukuyilawula.
I-protagonist hhayi kuphela ukuthi ungowesifazane ozwa ukuthi akakwazi ukulawula impilo yakhe, Kunalokho, lokhu "kuhlukumeza" okugcwele udlame, ukubulala nokufunwa ubulungiswa kusho ukuthi akazi ukuthi kwenzekani. Qaphela, yize kubukeka njengokuthokozisayo, empeleni kufakwe kusigaba njenge-horror (ngeke sikutshele ukuthi kungani).
Lapha uManel Loureiro uhlose ukwenza umfundi abambe iqhaza engxoxweni mpikiswano ngalokho ongazimisela ukunikela ngakho ukuvikela obathandayo.
Ngaleso sikhathi, akekho owayazi ukuthi kwenzekani. Ngaphandle kokuthi ingxenye enkulu yesintu izibulele ezinsukwini ezimbalwa. Phakathi kwabasindile kukhona u-Andrea, intombazane eneminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala, intandane futhi enesikhala esikhulu enkumbulweni yakhe. Kusukela ngalezo zinsuku, wayekhumbula kuphela ukuthi waphoqeleka kanjani ukuthi angene elolini lezempi eligcwele izakhamizi ezazithukile ezibalekela usongo olufanayo.
Una Indaba ye-apocalyptic lapho abalingiswa begcina izimfihlo, yize bona ngokwabo bengazi. Yize incwadi iqala kanjena, iqiniso ukuthi uManel Loureiro ube esedlulela esikhathini esizayo esikude, lapho umhlaba usushintshile futhi abasindile kanye nenzalo bazama ukubuyela "esimweni" ngaphakathi kwamanxiwa okwakungubuntu . Kepha kulapho okuvele khona lowo mphakathi uphinde wavela.
Umnyango, isasasa eliyinqaba kunazo zonke likaManel Loureiro
Icala lesiko. Owesifazane unesifiso sokusindisa indodana yakhe. UManel Loureiro umangale nge-thriller ebekwe eGalicia engaqondakali futhi edume kakhulu.
Ngakho-ke ungafingqa ukuthi uzotholani kule thriller. Ingabe isethwe eGalicia futhi kulo uzoba nephoyisa, uRaquel Colina, osanda kufika kuleli ezofuna ikhambi lendodana yakhe. Kodwa-ke, uhlangabezana nokubulala nokunyamalala okubonakala kuhlobene. Ngakho-ke, kulo lonke uphenyo lwakho, ngeke nje ubhekane nokuxazulula leli cala, kodwa nokuzama ukusindisa impilo yengane yakho.
Ngabe unesibindi sokufunda noma iyiphi yemisebenzi yakhe?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UManel Loureiro
Incwadi yochungechunge lweKadin, eyaziwa ngokuthi yi-Woman noma i-Force of Woman